Al-shabaab: “10 Askari Sheegey iney Dileen” – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Al-shabaab: “10 Askari Sheegey iney Dileen”
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay iney ka dambeysay Weerar lagu qaaday Fariisin ciidamada dowladda ay ku lee yihiin tuulo hoostagta Degaanka Bariire ee katirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Al-shabaab ayaa baraha ay wararkooda ku baahiyaan waxa ay ku sheegteen in dagaalka ay ku dileen kudhawaad 10 Askari oo katirsan Ciidamada Dowladda gaar ahaan kuwa sida gaarka u Tababaran ee Danab.
Al-shabaaba ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalka ay ku qadeen fariisin ciidamada Dowladda ay ku lee yihiin tuulada Shaam oo hoostagta deegaanka bariire,isla markaana waxa ay tilmaamen Shabaabka in dagaalka uu socday mudo sacaad ku dhawa,iskuna adeegsadeen hub noocyadiisa kala duwan.
Ururka Al-shabaab ma aysan sheegin khasaaraha dhinacooda dagaalka ka soo gaaray, waxa ayna sheegteen in 10 Qori ay dagaalka uga qabsadeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee ay dagaalka la galay.
Wali Saraakiisha Ciidamada dowladda ee ka howlgalka gobolka shabeellaha hoose kama aysan hadlin dagaalka ka dhacay shabeellaha hoose iyo khasaaraha ka soo gaaray dhankooda.
Sikastaba ha ahaate dhawaan ayey aheyd markii ciidamada dowladda soomaaliya ay al-shabaab kala waregeen degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose,halkaasi oo in mudda ah ay maamuliyeen kooxda al-shabaab.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey ee wada-hadallada Korneyl Caare iyo Somaliland
Next articleDhaarinta Xildhibaanadii Ay Ku Dhawaaqeen Guddiga Doorashooyinka Oo Ka Socota Kismaayo